नेप्समा ६०.५६ अंकको वृद्धि, यी कम्पनीमा लाग्यो पोजेटिभ सर्किट ! - सुनाखरी न्युज
नेप्समा ६०.५६ अंकको वृद्धि, यी कम्पनीमा लाग्यो पोजेटिभ सर्किट !
Posted on: October 20, 2021 - 3:11 pm
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं – साताको चौथो बुधबार नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा उच्च वृद्धि देखिएको छ । बुधबार नेप्सेमा ६० दशमलब ५६ अंकको वृद्धिसँगै नेप्से दुईहजार पाँच सय ७१ दशमबल ६६ अंकमा पुगेको छ । बुधबार २ अर्ब ७६ करोड बराबरको कारोबार भएको छ ।
मंगलबार नेप्से परिसूचक ७७.३३ अंकले घटेर २५१०.७३ बिन्दुमा अडिएको थियो । आज ३ अर्ब ७७ करोड ७३ लाखको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा पनि ६ कम्पनीका लगानीकर्ताले भने कमाएका छन् । बुधबार आँखुखोला जल विद्युत कम्पनीको शेयरमा १० प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।
त्यस्तै, युनिभर्सल पावर, मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी, नेशनल हाइड्रो पावर, सिएचडिसी जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । बुधबार नविल बैंकको ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ ।